Global Voices teny Malagasy » Libanona : Mpihira Nosamborina Noho Ny Faniratsirana Filoha Tany Anaty Hira · Global Voices teny Malagasy » Print
Libanona : Mpihira Nosamborina Noho Ny Faniratsirana Filoha Tany Anaty Hira
Voadika ny 06 Aogositra 2011 11:09 GMT 1	 · Mpanoratra Antoun Issa Nandika nirinandrea
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Libanona, Hafanàm-po nomerika, Mozika, Politika, Zavakanto & Kolontsaina
Ilay mpanakanto Libane Zeid Hamdan dia voatazona fotoana fohy tamin'ity herinandro ity noho ny fahasahiany nanala baràka ny Filoha Michel Suleiman tanatin'ny hira navoakany ny taona 2010.
Ilay gazety Libane Assafir  nitatitra ihany koa niaraka tamin'izany hoe navotsotra i Hamdan, saingy tsy talohan'ny tadion-dresaka nataon'ireo mpampiasa Twitter sy bilaogera namoaka ilay vaovao momba ny fisamborana voalohany azy .
Ny fiarahamonina anaty aterineto ao Libanona dia namoaka teo noho eo tsy fankatoavana ilay fitazonana an'i Hamdan, niaraka taminà pejy Facebook  natokana ho an'ny famotsorana an'i Hamdan izay nahasarika mpanohana mihoatra ny 2000 tao anatin'ny ora vitsy.
Zeid Hamdan (havia) niaraka tamin'i Mahmoud Radaidah. Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr alhussainy (CC BY 2.0)
Twitter koa dia nitsangana ho vavolombelona tamin'ny famoahana hiaka mafy, niaraka tamin'ny tenifototra #FreeZeid nipariaka natao ho toy ny fitaovana hamoahana ny hatezerana noho ilay fisamborana.
@﻿﻿﻿﻿LeShaque : @SleimanMichel  Tsy hitanareo ve ny mitranga amin'ireo namanareo Arabo tsy tia kiana ireo? #
@bilalhouri : Ny Aogositra 2010 ny Governemanta Libanezy no nanokatra ilay hiran'i Zeid tao amin'ny YouTube, ary androany izany no nifarana . #OntorNet  .
@nmoawad : #FreeZeid  (Avotsory i Zeid) ary sambory i Mohammad Iskandar!
@TajaddodYouth : Ry Filoha @SleimanMichel  fantatray ny fandalànao ny #freespeech  (na fahalalahana hiteny). Tsy maintsy avoaka i Zeid Hamdan. Voatohintohina ny zo fototra #Censorship  #FreeZeid  ….
@hindmezaina : “Ny andraikitry ny zavakanto sy ny mozika dia tsy ny handoka ny fitiavan-tena marefon'ireo olo-malaza fanta-bahoaka.”http://t.co/SqJXPJy #freezeid ….
Ny zavatra mampanahy ireo Libane maro dia ny fanohintohinana ny fahalalahana haneho hevitra ataon'ireo manampahefana izay nametraka avy hatrany lalàna efa tamin'ny andron'ny Frantsay, ho fanoherana ireo manakiana ampahibemaso ny Filohan'ny Repoblika. Ny fisamborana nandritra ny fotoana fohy an'i Hamdan dia nanaitra indray ny antsom-panavàozana ho fiarovana ny fahalalahana haneho hevitra.
Karl Sharro, tao amin'ny Karl reMarks , dia nanoratra valinteny fotoana fohy monja taorian'ny nivoahan'ilay vaovao mikasika ny fisamborana an'i Hamdan, nanasokajy ilay fihetsika ho “fampitahorana ara-tsaina” :
… Io tranga io dia nanome fijery marina loatra ny kolotsaina amin'izao vanim-potoana izao, momba ny famoretana sy ny fampiasana fahatany ny fahefana ao Libanona . Io hira resahana io, General Suleiman , dia gadona “reggae” izay nanosika ireo manampahefana tsy mahatanty sangy hanenjika an'i Zeid Hamdan tsy ampisalasalana, ary angamba mety ho amin'ilay ‘ompa’ nahakasika ny toerana Filohan'ny Repoblika. Io farasisan'ny andron'ny Frantsay taloha io dia natao fomba fanao hatrany teo amin'ireo manampahefana mba hanakombonam-bava ny fahalalahana hiteny.
Na dia ny hanohana an'i Zeid aza no fototra niaingàna amin'ny filazana fa tsy dia tena mahasosotra loatra ilay hira, mihevitra aho fa fomba fiady tsy nety iny. Ny zavatra tokony hiadiantsika dia ny fahalalahana haneho hevitra, tsy asiana famaritana, ary hikatsaka ny fanafoanana io lalàna taloha izay manome vàhana raka ny lalàna ny fisamborana toy izany. Tsy tokony hisy mpanao politika na olo-malaza ho ambonin'ny kiana izany, ary tsy tokony avela hampiasa ireo lalàna ireo ho làlana farany hahazoana ny fanajàna izay tsy azon'izy ireo avy amin'ny zava-bitany teo amin'ny tontolo politika.Ny andraikitry ny zavakanto sy ny mozika dia tsy ny handoka ny fitiavan-tena marefon'ireo olo-malaza fanta-bahoaka. ‘Ndao hiteny tsia ho an'ireny fampitahorana ara-tsaina ireny ary hiady ho an'ny fahalalahantsika hanao izay hahatezitra ireo andian'adala izay mitondra antsika ireo
Oussama Hayek  dia manasongadina ny maha-kidaladala an'io lalàna taloha Libanona Lèse majesté (misolelaka) io :
Ilay vaovao hoe voatàna nandritra ny fotoana fohy i Zeid Hamdan noho izy nanakiana ilay Filoha Mpitarika Lehibe sady Jeneraly Suleiman (Dear Great Leader President General Suleiman hafohezina hoe DGLPGS) dia nahazendana, nefa na izany aza dia fahatsiarovana nampalahelo momba ny tarazon'ny rafi-dalàna ao Libanona ihany io. Koa, isan'andro no andrenesantsika vaovao momba ny fisamborana olona iray hafa noho ny faniratsirana an'i DGLPGS.
Amin'ny firenena ara-dalàna izy misy “mpanjaka” tena izy na “majesté” tahaka an'i Angletera, Ireo lalàna momba ny faniratsirana Mpanjaka vavy na lahy dia tsy nampiharina efa hatramin'ny taonjato faha-18. Any Holland, ny fiantsoana ny Mpanjakavavy ho mpivarotena dia handoavanao sazy €400. Libanona dia toa ho isan'ireo firenena ao anaty ligy iray toa an'i Thailand  manao izay hanakànana ny fandrosoana amin'ny fampiharana ny lalàna Lèse majesté
Ny olana dia i DGLPGS dia tsy masina be toy ny fianakaviana mpanjaka ” Thai”. Olom-boafidy iray ao anaty demokrasia mangozohozo monja ihany izy. Na dia ireo demokrasia mangozohozo aza tsy afaka ny hiasa raha tsy azo kianina (mafy) ireo olom-boafidy ao.
Elie Fares tao amin'ny A Separate State of Mind (na Fomba Fisaina Hafa ) , nanohana fa raha kidaladàla ilay lalàna nampiharina hisamborana an'i Hamden, dia tokony hitodika any amin'ny fireneny ihany ireo mpanakiana :
Ny zavatra ataontsika koa dia hanakapokapoka ny firenentsika an-kavia sy an-kavanana, ambony sy ambany. Ary isaky ny misy zavatra tsy mampitovy hevitra antsika amin'ny hafa rehefa misy zavatra miseho.
Avelao hazavaiko ny amin'io.
Ny ohatra akaiky indrindra izao dia ny fisamborana an'i Zeid Hamdan androany, taorian'ny filazàna azy ho nanala baràka ny Filoha Libane, noho ny hira tsy dia misy ilàna azy loatra.
Tamin'ny fotoana nampidiràna am-ponja an’ i Zeid, dia nanomboka nanohitra ireo Libane mpampiasa twitter sy Facebook. Ny pejy Facebook natao hamotsorana an'i Zeid dia nahangona mpanara-dia 2000 tao anaty ora vitsy. Tsara kosa, sa tsy izany? Ny tiako holazaina, nampalahelo ilay fisamborana. Tokony haverina dinihana izay lalàna netnina nanatanteraka iny fisamborana iny. Tsy any amin'ny taona 1926 intsony isika, tamin'ny lalampanorenantsika “nosaintsainina” avy tamin'ny an'ny Frantsay tamin'izany andro izany. Efa novain'ny Frantsay ny azy ireo. Efa fotoana koa izao hanovàna ny antsika.
Endrika iray nisehoan'ilay fisamborana an'i Zeid Hamdan koa dia ny fanaovan'ny Libane maro ho tsinontsinona ny fireneny, ny sasany niantso azy io ho toerana tsy misy ilàna azy, ny sasany niantso azy io ho firenena mikororosy, ary ny sasany niantso azy io ho vongan-t*y.
Ny maha-tsy marin-toerana foana ny rafitra politikantsika tsy midika fa ny rafitra rehetra no mikororosy fàhana. Ary tsy satria hoe tsy mora ny famindram-pahefana dia midika fa hoe mitontongana ny firenentsika.
Ary fantatrareo fa ny tena mampihomehy dia, dia ambany mihoatra amin'ny zava-drehetra ny zavatra andrasantsika momba an'i Libanona mahatonga antsika hino ireo siosion-dresaka manaratsy ny firenena manontolo.
Ny fahalalahana hanakiana, ny fanarabiana sy fitazonana ireo mpitarika ara-politika ho tompon'andraikitra dia andry ijoroan'ny demokrasia. Raha te ho demokratika tokoa i Libanona, tsy maintsy manaja ny fototry ny fahalalahana hiteny sy haneho hevitra izy.
Araka izany, ny fisamborana an'i Hamden dia fampahatsiahivana tena nilaina fa i Libanona dia mbola latsaka ambany mihoatra izay noeritreretina momba ny firenena tena demaokratika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/08/06/20416/
 pejy Facebook : https://www.facebook.com/pages/Free-Zeid-Hamdan-from-Jail/198043086920262
 Karl reMarks: http://karlremarks.blogspot.com/2011/07/zeid-hamdan-and-general-sueliman.html
 General Suleiman: http://www.youtube.com/watch?v=L83n4zhg8Jw
 Oussama Hayek: http://oussama-hayek.blogspot.com/2011/07/lebanons-unacceptable-lese-majeste-laws.html
 A Separate State of Mind : http://stateofmind13.wordpress.com/2011/07/28/dear-lebanese-stop-selling-your-country-short/